सेतो पानी बगिरहने समस्याले हैरान हनुहुन्छ ? यसरी गर्नुहोस् घरमै उपचार ! – Ramailo Sandesh
काठमाडौँ । महिलाहरुको यौनाङ्गबाट सेतो वा हल्का पहेलो खालको पानी बग्ने प्राकृतिक प्रक्रिया हो, ल्युकोरिया (Leukorrhea) ।
महिनावारी सुरु हुने उमेरका किशोरीहरुदेखि महिनावारी रोकिएका महिलाहरुसम्म अर्थात् सामान्यतः प्रजनन उमेर समूह (१५ वर्षको उमेरदेखि ४९ वर्ष उमेरसम्म) का महिलाहरुमा हुन सक्ने नितान्त प्राकृतिक र सामान्य चक्र हो ल्युकोरिया।
महिलाको योनीबाट सेतो रंगको, चिपचिप खालको पानी बग्नुलाई स्वास्थ्यको भाषामा ‘ल्युकोरिया’ भनिन्छ।
यो भनेको हाम्रो शरीरले स्वतः महिला प्रजनन अंगको सफाइ गर्ने प्राकृतिक प्रक्रिया हो।
तर प्रकृतिले निर्धारित गरिदिएको त्यो उपयोगी प्रक्रियामा पनि कहिलेकाहीँ गडबडी देखापर्न सक्छ। त्यस्तो गडबडी देखापर्नु चाहिँ समस्याको सूचक पनि हो।सेतो वा हल्का पहेलो खालको पानी बग्ने आम महिलामा हुने समस्या हो ।
यसले महिला स्वास्थ्यमा ठूलो असर पनि गर्छ।महिनावारीको अघिपछि यस्तो पानी बग्नु धेरैको समस्या हो। कतिपय अवस्थामा यो अधिक मात्रामा हुने गर्छ। यसले अन्य रोगको संकेत पनि गर्नेगर्छ।